Tuesday, 26 June 2012 12:31	विकास कार्की
(17 votes, average 4.94 out of 5)
हिजो प्रधान मन्त्री बाबुराम भट्टराईले राजा ज्ञानेन्द्रलाई उछिने। लोकप्रियतामा सोच्नुभएको हो भने गलत। ज्ञानेन्द्र सक्रिय रहँदा उनी जति त्रसित थिए त्योभन्दा बढी रहेछन्, बाबुराम। ज्ञानेन्द्रको सवारी हुँदा सडक अरु गाडीका लागि प्रतिवन्धित हुन्थे। बाबुरामको मुलुक फिर्ती सवारी हुँदा त्यो भन्दा चर्को भयो। उनको सुरक्षामा सरकारले सडक आफ्नो कब्जामा मात्र लिएन हिड्ने र पसल खोलेर गुजारा गर्नेमाथि नै धावा बोल्यो।
Monday, 25 June 2012 18:25	फुर्पा तामाङ
गत जेठ ११ गते बिहान करिब १०:३० बजेको समयमा मेरी आमा न्हीमा ल्हामु तामाङले ७२ वर्षको उमेरमा हामी सबैलाई छोडेर यो धर्तीबाट बिदा लिनुभयो। म आमाको आत्माको चीर शान्तिको कामना गर्दछु। केही महिना अघिदेखि उहाँको उपचार नेपाल मेडिकल कलेज जोरपाटीमा भइरहेको थियो।
फुटको कांग्रेसी इतिहास
Friday, 08 June 2012 23:10	गोविन्द अधिकारी
नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनजस्तै बुझिनसक्नु छ नेपाली कांग्रेसको फुट पनि। काशीमा पढ्न बसेका बाहुन केटाहरूले औंठी र डिक्सनरी बेचेर खोलेको यो पार्टीजति सायद नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि फुटेका छैनन्। जनक्रान्ति नथाल्दै डिल्लीरमण रेग्मीले सुरु गरेका पार्टी फुटाउने र छोड्ने शृंखलामा अब स्वघोषित जनजाति नेताहरू आइपुगेका छन्। जनक्रान्ति सकिएकै दिनदेखि कांग्रेसलाई कमजोर बनाउने खेल दरबार र भारतले खेल्दै आएका हुन्।सायद, दरबारको भूमिका चाहिँ एनेकपा (माओवादी)मा सरेको छ। भारत अहिले पनि सक्रियै छ।
कांग्रेसको पहिलो जननिर्वाचित सरकारलाई हटाउने वातावरण बनाउने बेला तुलसी गिरीहरूको हावभाव यस्तै थियो। अहिले पार्टी छाड्ने धम्की दिनेहरूको लक्षण पनि त्यससँग मिल्दोजुल्दो छ। उनीहरू राजा महेन्द्रका 'महानता'बाट प्रभावित भएका थिए। यिनीहरू अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' लाई बिन्तीपत्र चढाएर उनैको पछाडि लागेका छन्।
राजा मर्दा मासुभात (स्मरण : दरबार हत्याकाण्ड)
Friday, 01 June 2012 06:48	ऋषिकेश दाहाल
(15 votes, average 2.93 out of 5)
रेडियो नेपालको नेटवर्क नै छैन। अल इन्डिया रेडियो पनि सुनिएन। सदरमुकाम मान्मा पुग्न चार घन्टा लाग्ने सुनाउँदै थिए घरवेटी। बिहान सात बजेतिर पाकिस्तानी रेडियोको फ्रिक्वेन्सी फेला पर्यो । धेरै त बुझिएन। 'नेपाल नरेशकी कत्लेआम' यस्तै सुनियो। २०५८ जेठ २० गते बिहान सबा सात बजे।
Thursday, 24 May 2012 10:43	गोविन्द अधिकारी
शाहरुख खानको दोहोरो भूमिका भएको हिन्दी सिनेमा 'डुप्लिकेट'को एउटा दृश्य अहिले अनायासै सम्झन पुगेँ। फिल्ममा शाहरुखमा बदमास र सज्जन पात्रको भूमिकामा अभिनय गरेका छन्। मनु दादा भन्ने बदमासले आफ्नैजस्तो अनुहार भएको अर्को व्यक्ति छ भन्ने थाहा पाएपछि बब्लुलाई मारेर परिचय फेरेर बस्ने षड्यन्त्र गर्छ।
अफिस जानै पर्ने?
Monday, 21 May 2012 08:37	स्वरुप आचार्य
(7 votes, average 1.57 out of 5)
बिहानै चिया लिएर मेरो कोठा छिर्नेबित्तिकै आमाले भन्नुभयो, ...बाबु आज त अफिस जानुपर्दैन होला नि? प्रेसको गाडीमा पनि तोडफोड गरे रे, पत्रकार पनि कुटिए रे। प्रेस पनि बन्द होला, अफिस न जा!'
सेती देख्दा दरौँदीको झझल्को
भात बाँड्ने पेशा होइन पत्रकारिता
बिहान विचार, बेलुकी समाचार
काजल मली स्कुल जान्नन्